ပါဝင်သည့်အမျိုးအစားနှင့်ပုံစံများရလဒ်များ။ | Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, ဇူလိုင်လ 18, 2013 Douglas Karr
သင်၏ပရိသတ်မှာကွဲပြားသည်။ သင်သည်ရှည်လျားသောကော်ပိုရေးရှင်းစာရွက်စာတမ်းကိုသင်တန်ဖိုးထားနိုင်သော်လည်းအခြားအလားအလာတစ်ခုမှာစီးပွားရေးအတွက်သင့်ကိုမဆက်သွယ်မီ feature စာရင်းကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုရန်သာလိုကောင်းလိုလိမ့်မည်။ ဒါ ContentPlus ထံမှအကြီးအ infographicယူကေအခြေစိုက်အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေး ၀ န်ဆောင်မှုသည်ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာကမ်းလှမ်းမှုအမျိုးမျိုး၊ ၎င်းတို့အဘယ်ကြောင့်အလုပ်လုပ်သည်နှင့်အချို့သောအထောက်အကူပြုသည့်အချက်အလက်များကိုခြုံငုံသုံးသပ်ထားသည်။ သူတို့ကအစရှိသည် ပူးတွဲဘလော့ဂ်ပို့စ် ကြောင်းအတူတူကအားလုံးကိုချည်နှောင်။
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအင်တာနက်သုံးစွဲသူများသည်ရှုပ်ထွေးသောအကြောင်းအရာသုံးစွဲသူများဖြစ်လာကြပြီးသူတို့၏ ဦး စားပေးမှုများမှာဆက်လက်တိုးတက်နေသည်။ အမှတ်တံဆိပ်သည်သူတို့၏ပရိသတ်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သောနေ့ရက်များဖြစ်သည်။ အတုအယောင်စံသတ်မှတ်ချက်များကိုထုတ်ဝေရုံမျှဖြင့်၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ရှိအခြားသူများနှင့်သတင်းအချက်အလက်တူညီကြသည်။ အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းကိုယနေ့အောင်မြင်စွာအကောင်အထည်ဖော်နေသောအဖွဲ့အစည်းများသည်၎င်းတို့ပရိသတ်များကြိုက်နှစ်သက်သောပုံစံများဖြင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအကြောင်းအရာများကိုပို့ဆောင်ပေးသောအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းအရာဖြစ်သည်။ အသစ်သတင်းအချက်အလက်အကြောင်းအရာမဟာဗျူဟာ Pick 'n' ရောနှောပါ.
Tags: ဘလော့ဂ်ဘလော့ဂ်ပို့စ်များဖြစ်ရပ်တခုfacebook ပို့စ်များအင်္ဂါရပ်များဆင်းသက်စာမျက်နှာများစျေးကွက်ရှာဖွေရေး Infographicsသတင်းသတင်းလွှာtweetsဗီဒီယိုများက်ဘ်ဆိုက်whitepapers
ဂီတသမားများအားရုန်းကန်ရန်သုံးနိုင်သည့်မဟာ SEO SEO မဟာဗျူဟာ ၅
22:2013 pm တွင်ဇူလိုင်လ 2, 42
တောက်ပသော အချက်အလက်ဂရပ်ဖစ်၊ ကောင်းမွန်စွာသရုပ်ဖော်ထားပြီး အကြောင်းအရာကောင်းမွန်သော်လည်း အချိုများလွန်းပါက သင့်သွားများကို ပုပ်သွားစေနိုင်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်၏အကြံပြုချက်မှာ စုံတွဲတစ်တွဲနှင့် စတင်ကာ အရသာနှင့်အမျိုးကွဲအားလုံးကို မစမ်းကြည့်မီ ၎င်းကို အောင်မြင်မှုဆီသို့ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ။
22:2013 pm တွင်ဇူလိုင်လ 11, 37
တကယ်ပါပဲ! သို့မဟုတ် လက်ကျန်အချို့ကို သိမ်းဆည်းပြီး တစ်လျှောက်လုံး အသုံးပြုပါ။ 🙂 ကျွန်ုပ်တို့သည် နက်ရှိုင်းစွာ သုတေသနပြုပြီး ကောင်းမွန်သော အကြောင်းအရာများကို ဖော်မတ်များကို အသုံးပြု၍ နှစ်သက်ပါသည်... ဘလော့ဂ်ပို့စ်ကို စက္ကူဖြူ၊ တင်ဆက်မှုအဖြစ် စာရွက်ဖြူတစ်အုပ်အဖြစ် လွယ်ကူစွာ ချဲ့ထွင်နိုင်ပြီး အချက်အလက်များကို ကောင်းမွန်သော infographic တွင် ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။